Inani elikhulu imibhangqwana engenanzalo ingakhetha ezintweni wayesengaba abazali eside elindelwe ingane sibonga ukwethulwa basiza ubuchwepheshe zokuzala. Artificial kwesibeletho fertilization (IVF) - indlela lesichubekako kakhulu. I izinkomba ukusetshenziswa kwakhona izinhlobo ezahlukene ukungazali kuzo zombili kwabesifazane nabesilisa. Kuye izinqubo zokugula kahle ongafinyelela 50% nangaphezulu. ICSI-avundiswa - okuhlukile eliphezulu ukusebenza IVF.
Ngokokuqala ngqá kwesibeletho fertilization indlela yasetshenziselwa eNgilandi ngo-1976. Kodwa, ngeshwa, lokhu sokukhulelwa kwaba ethunjini (amashubhu esibeletho). Kodwa kakade ngo-1978, e sibhedlela sebebe wazalwa Bourn Hall - the lokuqala ingane "ukukhulelwa okwenziwa ngaphandle kwesibeletho". Unina - Luizy Braun - isuswe amashubhu fallopian. Futhi ngo-1993, owokuqala kwenziwa eBelgium ICSI-kokukhulelwa. Izibuyekezo of the inqubo, esikhathini esiningi, nekusebenta eliphezulu le ndlela. Kodwa esimweni ngasinye uhlukile, futhi inkolelo zombili yi emihle nemibi, yebo, akukwazi.
Kanjani ukufeza ngaphandle kwesibeletho inqubo kokukhulelwa?
Okokuqala, udinga ahlolwe ngudokotela. Njengoba inqubo yenziwa "ngaphandle kwesibeletho", isidumbu nowesifazane zihlobene germ cells. Ukuze wenze lokhu, usebenzisa izidakamizwa e unina esizayo sikhuthaze ukukhula amaqanda nokulungisa endometrium ukukhulelwa. Ngemva kokufinyelela ukusebenza edingekayo, by wokubhoboza ka oocyte wesibeletho ukubuyiswa. Ukuze kwenzeke kokukhulelwa, ezibekwe ngamapayipi test ne isidoda, lapho izimo zifana zemvelo. Ngemuva kwezinsuku ezintathu kuya kweziyisihlanu, imibungu iphila kuthiwa zithutha phakathi komgodi lesizalo. Ngokuvamile baphathe imibungu amathathu noma amane, njengoba abanye bangase yaliwe umzimba female futhi uyokwakha omunye wabo kuphela. Kodwa ngenxa yokusizwa angafika nokukhulelwa izingane eziningi ngasikhathi.
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini IVF IVF + ICSI?
In yendabuko IVF Iqanda nesidoda ibekwe endaweni ekhethekile lapho kokukhulelwa eminye kuyindlela yemvelo (kukhona isingeniso ahlukene kwesidoda phakathi cytoplasm neqanda). ICSI-inqubo It ehilela ukujova ngomjovo isidoda ku iqanda ngokusebenzisa umjovo microneedle. Of izinga isidoda nokukhulelwa imvamisa lapho ivela khona, njengoba umthetho, ungenciki. Ukuze inqubo, kumele okungenani oyedwa izinga isidoda.
Kangakanani inqubo ICSI?
Ngemuva kokuqeda zonke izigaba wokulungiselela (njengaku-IVF ezivamile): ukushukuma wesibeletho, wokubhoboza ukwelashwa isidoda Iqoqo iqala ukulungiselela zalisa iqanda. Kuze kube yimanje, i-sesayensi yemibungu nokukhula kwayo usebenzisa reagent ekhethekile kususa izingqimba olwawuvikele. Ngaphansi kwe-microscope, kuthathwe isidoda ezimatasa. Bobabili amaseli afakwa imvelo ekhethekile oyinyumba nge izinga lokushisa edingekayo. Khona-ke, usebenzisa micropipette esibelethweni ekhethekile esinqunyiwe ngu isidoda umsila wahlukaniselwa futhi ibekwe endaweni microneedle. Sesayensi yemibungu nokukhula kwayo usebenzisa ezandleni ngokucophelela okukhulu, ukubukela yesehlakalo ngesibonakhulu futhi nokulawula ukunyakaza kwabo zonke wethula isidoda ku iqanda. ICSI-inqubo seliphelele. Manje kudingeka ulinde kuze emva kokukhulelwa futhi iseli division lokuqala. Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini IVF IVF + ICSI ngaphezu inqubo kokukhulelwa? Empeleni, lokhu umehluko kanye ekupheleni. Ngemva yimpumelelo kokukhulelwa, owesifazane ngeke kwenziwe ngaphansi kokuqondisa njalo odokotela kanye ngemva IVF.
Iziphi izimo ezicacisa inqubo ICSI?
Ukuvundiswa ICSI eyenziwa ngaphansi amafomu olunzima kunalo lonke ake ukungazali wesilisa, untreatable. Ngokwesibonelo:
Azoospermia - kokunyamalala ephelele isidoda ku ejaculate.
Teratozoospermia - khona spermatozoa kokuba ukucushwa evamile, ngo imali engaphasi kwe-14%.
Oligozoospermia - anenombolo enganele isidoda.
ukungabi azalwa naso we deferens vas.
Isimo emva vasectomy.
Ngaphezu kwalokho, indlela ICSI osetshenziselwa Kungasebenti kahle kwaletinye ukwakheka qualitative ambalwa of isidoda, ukhwaliti ongaphakeme "unfrozen" lesidoda okwazanywa akuphumelelanga ka-IVF, ukungazali umsuka elinganqunyiwe.
Ngaphambi inqubo, ICSI nowesifazane ngizodabula kokuxilongwa:
uhlobo legazi, RH isici;
isifo sokusha kwesibindi kohlobo C no B.
Imiphumela cwaningo kuhlala kusebenza izinyanga ezintathu ezilandelayo.
Umuntu wesifazane kufanele afeze izifundo ezifana:
igazi ukuhlaziywa hormone (FSH, LH, prolactin, estradiol, testosterone, progesterone, TTG, DHA-S);
swab kusukela ipheshana zangasese izifo kufihlwe nezifo ezithathelwana ngobulili;
igazi ukuhlaziywa kanye kwamakhemikhali emzimbeni emitholampilo;
Smear ku izitshalo;
Njengoba belungiselela ICSI kuhilela kokubonisana saziso nge udokotela wezifo zabesifazane ukuze Izimo kungenzeka.
Ngoba abantu, ucwaningo ezibaluleke kakhulu belungiselela inqubo fertilization isidoda. Kuyinto ngokusebenzisa le ukuhlaziywa kunqunywa omuntu okukhulelwa. ukuhlaziywa isidoda lembula izici ambalwa kanye qualitative kwesidoda, kanye ilungu izifundo ezilandelayo:
spermotest - ukuhlaziywa kwesidoda ikhono alondoloze ukuhamba e ngamapayipi yokuhlola;
ekutholeni inombolo ka leucocytes e isidoda ;
ibala smear ukuhlaziywa.
Ngosuku oocyte wokubhoboza owesifazane kwenqatshelwe udle, uphuze kuphela ngemva kwemvume kadokotela. Indoda izinsuku ezintathu noma ezine ngaphambi kunemidanti wokudeda bezoziphatha izinsuku ezimbalwa akazange baphuze utshwala.
ICSI-kokukhulelwa kuholela kwesisu 30-60% of amacala. It kuncike isimo amaseli enzalo, kwabesifazane nabesilisa (cishe omunye wabo uphethe anomaly zofuzo), kanye sesayensi yemibungu nokukhula kwayo ziqu abenza inqubo (phakathi naleyo nqubo egg kungalimala). Uma ekukhulelweni lizwakele, ematfuba ukuthi kwamaseli elalisanda kumiswa uzosungula umbungu okunempilo 90-95%. Kufanele kuqashelwe ukuthi imiphumela emihle kaningana ingaphansi kwe ezivamile. Uma kungenzeka umphumela inqubo imibungu eziningana etholwe kwenziwe nokongiwa zabo besebenzisa liquid nitrogen. imibungu okunjalo ngeke ulahlekelwe impahla yayo ngisho nangemva kweminyaka eminingi.
Lokhu kungaphazamisa umphumela inqubo?
yimpumelelo ICSI-kokukhulelwa It kuxhomeke ezicini eziningana:
kubangela ukungabi nenzalo;
Ukuze uthole umphumela omuhle inqubo kudinga spermatozoa asebenzayo kusuka besilisa isidoda nowesifazane eliphezulu oocytes. Uma umuntu engenaye ongalihlenga isidoda asebenzayo, ematfuba ebamba isisu incipha.
Kukhethwa isidoda physiologically avuthiwe
Isici Male has nomthelela omkhulu ukuthuthukiswa umbungu. Ngokuvamile imbangela ukungabi nenzalo wesilisa ukhonza inqwaba isidoda beya kule ejaculate. Isidoda avuthiwe ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi asidi i-hyaluronic. Kusekelwe le ndlela bese ukhetha amaseli oyifunayo. embriologist Udokotela ukhetha biochemically isidoda abanekhono elihlobene ne gialorunanom. Kuyinto la mangqamuzana physiologically avuthiwe ukuze usetshenziselwe ICSI.
ICSI-kokukhulelwa: izindleko inqubo
Nsuku zonke, inqwaba yabesifazane unesithakazelo kahle, izindleko inqubo, ngifuna emtholampilo kangcono inqubo. ERussia, ezama esondele ngentengo eyodwa-ICSI fertilization ruble ayizigidi 150-200. Phesheya, izindleko inqubo enjalo ngenhla. Kwa-Israyeli - cishe 2-emhlanjini. E-United States, eJalimane, Switzerland - e 3-4 izikhathi.
izingozi ezingase zibe khona
Naphezu izinzuzo eziningi, ICSI, kokukhulelwa It has eyodwa ethile sina - kwemvelo isici akusebenzi lapha. Lokhu kuyaphawuleka ikakhulukazi abesilisa khona izifo zofuzo umuntu (isib Klinefelter Syndrome, nabanye) ukuthi abakwazi okukhulelwa ngaphandle kokusebenzisa izindlela ezihambisana. Izifo ezihlala kungenziwa ngofuzo futhi zenzeka eminyakeni eminingi eyadlula. glitches bofuzo ezinganeni esizayo musa ukuthuthukisa ngenxa inqubo IVF uqobo. Nokho, abazali ukungazali kungathinta impilo inzalo. Ukuze ukuthola kungenzeka chromosomal futhi kwezinso zofuzo umbungu ngabanye, kutuswa ukuba afeze zangaphambi yenzeka ngoba uyayazi imbangela. It kungenziwa esiteji phezu blastomeres eziyisithupha.
Yiziphi ezinye izindlela ngaphandle kwesibeletho fertilization?
ISIPHO - oocytes futhi isidoda (gametes) zidluliselwa ku-tube fallopian, uma okungenani eyodwa usizo.
Zefta - oocytes avundiswa (zygotes) kuthiwa zithutha phakathi tube fallopian.
OD - ECO oocyte donor , kulandele kokuthutha umbungu phakathi retsipientki kwesibeletho. Le ndlela isetshenziswa engekho amaqanda e abesifazane ukuhlukumeza imisebenzi yabo, izifo ezibangelwa ufuzo e unina, i-menopause zemvelo.
I "umama ngokwesivumelwano" - imibungu abazali zofuzo ingane eziveza zidluliselwa esibelethweni yomunye wesifazane. Isizathu salokhu kungenzeka ukungabi noma ukungeneli kwesibeletho esiguli, kodwa ukulondolozwa umsebenzi wesibeletho.
inqubo-IVF Yiqiniso, a ebizayo kanye nesikhathi-ukudliwa, nezinto ezidingekayo ukuze sifeze insemination, babe hhayi yonke imitholampilo ukuthola udokotela oqeqeshwe ngokuphelele futhi kunzima ngempela. Nokho, lolu hlelo ivumela eziningi engenabantwana imibhangqwana ukwazi injabulo enkulu umama kanye ngubaba.
Namanabukeni abadala Seni: Uhlolojikelele, izinhlobo, izici